Akorany paoma sy dibera - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
tsindrin-tsakafo180 minitra285 kaloria
Aza adino ity fomba fahandro tena tsara natao tamin'ny koba mora vahana sy famenoana paoma mahasalama ity. Miaraka amin'ny Thermomix antsika dia afaka manamboatra fomba fanamboarana toy ireo akorandriaka ireo amin'ny fomba tsotra sy haingana.
Ny tena tiako indrindra amin'ity resipeo ity dia ny tsiro menaka manitra nalainay tamina voany voankazo. Tianay koa ny tsiro kanelina maivana ao aminy izay tena tianay tokoa ny miaraka amin'ny paoma.
Ny endrik'ilay kôkôsy dia tratra amin'ny alàlan'ny famolahana ny koba toy ny roller, izay hanapahantsika silaka ary avelantsika hameno ilay voankazo. Mba tsy hahavery ny antsipiriany dia azonao atao ny mahita ny horonantsarinay mampiseho izay hanazavanay tsikelikely ny fomba fahandro.
1 Akorany paoma dibera
Fantaro ny fomba fanamboarana akondro mamy vita amin'ny akorandriaka. Izy ireo dia matsiro indrindra amin'ny alàlan'ny paoma famenoana ary miaraka amina paoma sy kanelina manokana.
Fotoana manontolo: 3H
Ronono manontolo 160 ml
Yaourt tsotra 2 sotro fihinanana
Vovo-pisakafoanana 1 sachet (15 g eo ho eo)
600 g ny lafarinina varimbazaha
Paoma mena 3, voahitsakitsaka ary notapahina ho farantsa kely dia kely
Sugar mba hafafiny ny koba
Dibera 125 g, atsonika
Siramamy 5 sotro fihinanana
Kanelina fihinana 2 sotrokely
Ao amin'ny veranay Thermomix dia ampio ny ronono 160 ml, ny siramamy 60 g, ny atody, ny sira kely ary ny masirasira mpanao mofo vaovao 25 ​​g. Mandrindra izany mandritra ny fotoana 2 minitra amin'ny 37 ° amin'ny hafainganana 2.
Atsanganay ny sarony ary ampio yogourt voajanahary 2 sotro fihinana, dibera malefaka 150 g, sachet ny vovo-mofo ary lafarinina varimbazaha 600 g. Mandrindra izany mandritra ny fotoana 3 minitra amin'ny hafainganam-pandehan'ny fametahana. Aorian'ny fametahana dia hamarinina fa manana koba malefaka sy lasitike isika. Manarona ny vera izahay ary mamela azy hiala sasatra mandritra ny 30 minitra.
Raha avelantsika hiala sasatra izy, dia manapaka kely ny paoma, apetraka ao anaty vilia iray ary apetraka. Manomana latabatra misy lafarinina voafafa izahay hanaparitahana ny koba.
Apetrantsika eo amin'ny koba ny koba ary amin'ny tanantsika ary mametafeta kely mba hamoronana baolina. Miaraka amin'ny fanampian'ny tsipika mihodinkodina dia manaparitaka ny koba isika, amin'ny totaliny dia hamorona efamira 35 × 55 cm. Araraka siramamy amin'ny tanantsika eo ambonin'ny lafarinina ny siramamy ary aparitantsika eo amboniny ny poma mandra-rakotra azy manontolo.
Afaka manomboka manafana ny lafaoro hatramin'ny 200 ° isika. Maka ny sisiny tery isika ary manomboka manakodia ny koba rehetra mba hamorona horonana. Raha vantany vao vita izahay dia maka antsy lehibe ary manapaka silaka tokony ho 2 sm ny hateviny.
Manomana lovia iray izahay izay afaka miditra ao anaty lafaoro ary mametraka ireo silaka voakapa, mitandrina fa tsy hisokatra izy ireo. Ataonay ao anaty lafaoro izany ary andrahoy mandritra ny 2 minitra miaraka amin'ny hafanana ambony sy ambany. Tokony ho volamena izy ireo.
Afangaro ao anaty lovia ny sotro fihinana 5 sy ny sotro kanelina amin'ny tany roa. Rehefa masaka ny akorandriaka dia aparitantsika amin'ny dibera voarendrika (efa natsonika tao anaty mikraoba tamin'ny herin'ny ambany) ary namafazana ny siramamy sy kanelina. Rehefa avelantsika hangatsiaka izy ireo dia hataontsika vonona hisotro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Akorany paoma dibera